Balaa Boeing 737 Max 8tiif nama tokkotti Dolaarri mln 800 gaafatame - BBC News Afaan Oromoo
Balaa Boeing 737 Max 8tiif nama tokkotti Dolaarri mln 800 gaafatame
Balaa Boeing 737 Max 8tiif Abbaan Taayitaa Aveeshini Ameerikaa beenyaa nama tokkotti Dolaarri mln 800 gaafatame.
Obbo Zakkaariyaas Asfaawu Shinquxee obboleessa Mulugeetaa Asfaawu Shinquxeedha.
Obbo Mulugeetaan ammo xiyyaara Daandii Itoophiyaa A L I Bitootessa 1 ganama wayita gara Naayiroobiitti namoota 157 qabatee balali'aa jiru balaa uumameen lubbuun darbe keessaa tokkodha.
Obbo Zakkaariyaas akka jedhanitti Sanbata galgala obboleessa isaanii Dilbata ganamaa lubbuun darbuuf jiru sana waliin maatii waliin ta'anii hirbaata nyaataa waliin jebbeessaa waarisiifatan.
Naannoo mana isaaniitti bahaniis waa'ee jireenya dhuunfaa isaanii waliin haasa'aniiru. Obbo Mulgeetaan nama maatii qabuufi abbaa ijoollee sadii ture.
Obbo Mulugeetaan dhimma hojiin walqabateen walga'iifi leenjiidhaaf ture kan gara Naayiroobii deemaa turan.
Obbo Zakkaariyaas du'a obbleessa isaanii kanaan ofii isaaniis, haati warraa oboleessa isaafi ijoolleen isaa gadda guddaadhaan kka miidhaman ibsu.
Obbo Zakkaariyaasiifi obboleessi haati warraa Obbo Mulugeetaa Ameerikaa waan jiraataniif haadha warraa obboleessa isaanii kanarraa bakka bu'ummaa seera qabeessa fudhachuudhaan balaa uumamee ture sana waliin walqabatee dhimmoota seeraa jiran kamiyyu raawwachiisaa akka jiran dubbatu.
Erga gara Ameerikaa dhufanii boodas dhimmoota daandii xiyyaaraa hordofuudhaan abukaatoo dhaabbachuufi abokaatota bebbeekamoo barbaaduudhaan kampaanii xiyyaara omishu Boeing akka himatan dubbatu.
Obbo Sheekispiir Fayisaan ammoo Ameerikaa Meeriilaandiin kan jiraatu yommuu ta'u, waggoota 18 oliif hojii abukaatummaa akka hojjetan dubbatu. Dhimma obboleessa Obbo Zakkaariyaasiifi lammiilee Keeniyaa balaa uumamee kanaan maatii isaanii dhaban qabatanii Boeing irratti akka himannaa banan BBC'tti himaniiru.
Dhaabbanni abukaatoo isaanii biiroowwan seeraa Firiidman Ruubaniifi Paawor Roojarsi waliin akka hojjetus ni dubbatu.
Image copyright Sheekispiir Fayisaa
Akka Obbo Sheekispiir jedhanitti, Siyaatiliifi Chikaagootti abukaatoowwan dhimma daandii xiyyaaraa waliin walqabaturratti muuxannoo qaban walitti qabuudhaan, biyyoota namoota balaa xiyyaaraa kanaan maatiifi firoota isaanii dhabanii Itoophiyaafi Keeniyaa deemuudhaan dubbisuun Boeing fi adeemsa xiyyaara kana omishuu keessatti kan hirmaatan himanneera jechuun dubbatan.
Himannaan Boeing irratti banan akka kennameeru kan himan Obbo Sheekispiir, deebii isaanii eeggachaa jiraachuu ibsu.
Boeing irratti himanni fuula 37 qabu akka baname himanii dubbii ijoo himata kanaa yeroo ibsanitti akkas jedhan.
Boeing akeekkachiifni hedduun osoo isaa kennamuu rakkoo jiru sirreessuu dhiisuun keesumaa Daandiin Xiyyaaraa Indoneeshiyaa Laayi'on Eeyir Onkoloolessa keessa caccabee.
Itoophiyaadhaaf ammoo xiyyaaricha rakkoo qabu waliin Sadaasa 2018 kennuufiifiin, akkasumas, Boeing xiyyaarichi rakkoo akka qabu osoo beekuu ta'e jedhee Daandii Xiyyaraa Itoophiyaattifi biroo akka Itoophiyaatti kan gurguru ammoo kan adda ta'e waan tureef lubbuu namaa balleessuu isaaf beenyaa akka kaffaluu qabuufi Boeing ofiima isaanillee akka adabamuu qabu himannaa akka banan dubbatu.
Himannaa Boeing irratti bananiin maallaqa beenyaaf gaafatan hanga isaa akka hin kaa'iin kan himan Obbo Sheekispiir lubbuu namootaa badeef kampaniin kun akka badii akkasii lammaffaa hin hojjenneef barsiisuuf akka ta'utti nama tokkotti hanga Dolaara miiliyoona 100 ni adabama jedhanii akka yaadanis ibsaniiru.
Boeing kampaanii bara 2018 keessa Dolaara Biliyoona 110 buufatedha.
Himannaa Abbaa Taayitaa Aveeshinii Federaalaa
Akka Sheekispiir jedhanitti, ET 302 xiyyaarra Boeing 737 Max 8 namoonni 157 imalaa kan turan yommuu ta'u, namoonni hanga ammaatti himannaa banan walakkaadha.
Abbaa Taayitaa Aveeshinii Federaalaa Ameerikaa kan himachuuf jiru garuu isaanuma qofaadha.
Dhaabbatichi xiyyaaronni Boeing balali'uudhaaf ni danda'u jedhee dhaabbata mootummaa hojii to'annaa hojjetu yommuu ta'u himanni isaanii akka agarsiisutti, dhaabbatichi hojii mataa isaa dhiisee kampaanii omishee daldalu kana waliin "shira" keessa galuu isaanii eeruun akka himatan dubbatan.
Abbaan taayitaa aveeshinii federaalaa xiyyaarri tokko omishamee yeroo xumuramu gabaaf osoo hin dhiyaatiin dura sakkatta'amuu, qoratamuufi balali'uudhaaf ga'aa ta'uu isaa erga ilaalee booda waraqaa raga dhaabbata kennudha.
Haata'u malee, humna namaafi maallaqa ga'aa hin qabnu jechuudhaan itti-gaafatamummaa sakkata'uufi qorachuu dabarsee Boeing tiif kennee ture.
Abbaan taayitichaa komiin yeroo dhiyaatan xiyyaaronni akka hin balaliine, akka hin gurguramne gochuu osoo danda'uu, dorgommii gabaa Ayiir Baas kan Faransaay waliin jiru callisuun balaa xiyyaaraa kan Indoneeshiyaa dabalatee namoonni 300 ol dhumaniiru jedhan.
Himannaa banan irratti maamiltoota isaaniif nama tokkotti beenyaa Dolaara miliyoona 800 gaafachuu isaanii kan dubbatan Obbo Sheekispiir, mootummaan Ameerikaa iyyata isaanii kanaaf deebii kennuudhaaf yeroo ji'oota shan akka qabus ibsaniiru.
Yoo hin deebisan ta'e gara mana murtii deemuudhaan dirqisiifnee maamiltoota keenyaaf haqa barbaachuu itti fufna jedhan.
Boeing seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif yakkaan qoratamaa akka jiru kan eeran Obbo Sheekispiir, qaamni haqaa Ameerikaafi qaamni yakka qoratu FBI jedhamu yakkaan qorataa jiraachuu himan.
Kun seenaa Boeing keessatti ta'ee hin beeku kan jedhan abukaatoon kun yakki kun jabaafi seera yakkaa, maallaqaafi dhibaa'ummaarra kan darbeedha jedhu.
"Nuti namoonni osoo odeeffannoo qabanii beekaa dhoksan jennee amanna," kan jedhan Obbo Sheekispiir Ameerikaattis seenaa omisha xiyyaaraattis tarii seenaa warshaaleettiyyu himannaa guddaa ta'a jedhan.
Himanni kun FAAn akka omishtoota xiyyaaraa sirriitti hordofuufi waraqaa ga'umsaa kennuuf isa dirqisiisa. Kuna mmoo hunda keenyaaf balaliiwwan xiyyaaraa naga qabeessa akka ta'an godha, jedhan Obbo Sheekispiir.
Maatiin FAA itti gaafatamaa gochuudhaan firoota isaaniitiif haqa argata. Boeing ammoo dogogora isaa waan ta'eef yakkaa jalqabaadha, FAAn erga balaan xiyyaraa Indineeshiyaa qaqqabee Boeing 737 Max 8 dhorkuudhaan hojii akka dhaabu gochuu ni danda'a ture jedhu abukaatichi.
Boeing balaa qaqqabetti akka gadde ibsuudhaan dhiifama gaafachuun isaa ni yaadatama. Kun garuu Obbo Zakkaariyaasiif kan liqifamu miti.
Kan dhiifama gaafatamu nama miidhamedha kan jedhan Obbo Zakkaariyaas, Boeing garuu dhaabbileen sabaa himaaleetti ba'uudhaan kan dhiifama gaafate hawwaasa waliigalaa ta'uu isaa kaasuudhaan; warren balaa sanaan maatii isaanii dhaban teessoo qabaachuu malu jechuudhaan maatii kanaaf kampaniin hanga Boeing ga'u waraqaa ykn abaaboo gadda ittiin ibsullee erguu dhabuusaa kaasu.
"Abbaafi haatikoo inteneetii hin qaban; haatikoofi abbaankoo kan Boeing TV irratti jedhe arguu hin danda'an" jechuudhaan guyyaa balaan Daandii XIyyaara Itoophiyaa qaqqabee kaasee hanga turban tokkootti mana maatii isaaniitti deddeebiyanii abaaboofi kaardii erguudhaan gaaffiiwwan qabaniif hanga danda'an deebii kennaafiif gadda isaanii ibsataa turuu ibsu.
Dabalataanis Boeing ibsa isaa keessatti xiyyaarichi lafarraa ka'ee turtii daqiiqaawwan ja'aa qilleensarra ture qofaa kaasuudhaan xiyyaarichi caccabuudhaaf warra oofan akka balleessoo ta'an gochuudhaaf yaaluu isaa eeru.
Dogogorri guddaan garuu xiyyaarri hojjetame 737 irraa gara 737 Max tti jijjiiraan dizaayinii taasifame; wantota akka gatii hir'isan hunduu akka baruufi akka dubbatu hin barbaadan jechuudhaan, Boeing wayituma ba'ee dubbatutti balaa kanaan obboleessa isaa dhabuun akka isa miidhe dubbata.
"Boeing gaddineera yoo jedhe; kan dandeenyu gochuu ni dandeenya jechuu danda'a garuu nu sobaa jira."
Maatiiwwan haqa barbaadan
Obbo Zakkaariyaas akka maatiitti gaddarra ta'uu qofaa osoo hin taane haqni akka argamu barbaanna jechuun dhiibbaa dacha isaanirra jiru dubbatu. Kan nuti dhabne hirkoo maatiidha jechuudhaan haai warraa isaafi ijoolleen isaa akkasumas haatiifi abbaan isaa gadda isaanirra ga'e ibsu.
Haati keenya dhibee sukkaaraa waan qabduuf tibba gaddaa sana isheefis maatii isheefis yeroo rakkisaa ture kan jedhan Obbo Zakkaariyaas, yeroo hedduu dhukkubbiin sukkaaraa isaanii akka isaan rakkisaa tureefi gaddi isaanii guddaa turuusaa dubbatu.
Kanaafis gara waltajjii haqaatti geessuudhaaf aniifi obboleessi haadha warraakoo dura dhaabbachuudhaaf kan murteessine.
Dogogorri hojjetame akka dhokatee hin hafneefi ifatti akka bahuuf Boeing balali'uu ni dandeessa jechuudhaan waraqaa raga ga'umsaa qaama kennu Abbaa Taayitaa Aveeshinii Federaalaa himachuun bu'aa qaba jedhan.
Diinqa 'Boeing' keessatti rakkoo maaltu uumame?
Balaliistonni Itoophiyaa 'funyaan xiyyaaraa gadi-gugguufe to'achuu hin dandeenye'
Daandii Xiyyaara Itoophiyaas ta'e waraqaa raga Abbaan Taayitaa Aveeshinii Ameerikaa kenneef amananii xiyaara kan bituu danda'an kan jedhan Obbo Zakkaariyaas, xiyyaaronni Boeing omishu hunduu qaamni kun balali'uu dandeessu jedhee waraa ga'umsaa erga kenneefiidha kan gara hojiitti galan jechuun dubbatu.
Kanaaf, waajirri kun himatamuun rakkoo uumame gama baruudhaan, Boeing 737 Max 8 irratti wanta nuti hin ilaaliin maal ture kan jedhu gadi fageenyaan baruudhaaf waan dandeesisuuf faayidaa qabas jedhu.
Lammaffaan jedhan Obbo Zakkaariyaas rakkoon kana fakkaatu akka irra deebiyee hin uumamneef waajirri kun maqaa ofii isaaniitiif akkasumas amanataa ummata Boeing fayyadaman deebisanii argachuudhaaf of eeggachuu jalqabu.
Lammileen Ameerikaa dabalatee xiyyaaricha keessa kan turan almmilee biyyoota 30 olii akka turan yaadachuun, lammileen biyoota biroo qofaa osoo warra Ameerikaadhaafis itti-gaafatamoo waan ta'aniif of eeggannoo isaanii ni dabala jechuun ibsan.
Hundaa ol adeemsi seeraa kun bu'aa akkamiis argamsiisu qaamoleen gaafatamuun irra jiraatu gaafatamuu akka qaban himuun dhimmichi dhimma salphaa miti jedhu.
Boeing tiin saatii kamiyyuu himachuun ni danda'amaa?
Lammileen Itoophiyaa balaa sanaan maatii isaanii dhaban hanga ammaa Boeing hun himatiin jiran abukaatoo bakka nuuf bu'a jedhan filatanii himannaa isaanii osoo dhiyeeffatanii gaariidha jechuun gorsu.
Boeing tiin himachuun kan danda'amu guyyaa balaan sun qaqqabee kaasee yeroo waggaa lamaa keessatti akka ta'e eeranii, yeroo turaa adeeman ammoo seenaan isaa qaqabbanaa'aa akka deemu, barbaachisummaan dhimmichaas akkasuma qaqabbanaa'aa deema jechuun dubbatu.
Hanguma turaa deeme ragaaleen dadhabaa deemuu waan danda'uuf yaada isaanii walitti qabatanii adeemsa seeraa osoo jalqabanii gaarii akka ta'e ibsan.
Balaa Xiyyaaraa: Diinqa 'Boeing' keessatti rakkoo maaltu uumame?
Balaliistonni Itoophiyaa ET302 'funyaan xiyyaaraa gadi-gugguufe to'achuu hin dandeenye'